နိဂုံးမဲ့အလွမ်း ………….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နိဂုံးမဲ့အလွမ်း …………..
Posted by နွယ်ပင် on Sep 26, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.., Short Story |9comments
ကောင်မလေးရဲ့ နာမည်က ကြယ်ဖြူ အသက်က (20) စွန်းစွန်း ပုံစံလေးက အခုခေတ် ကောင်မလေး တွေရဲ့ ပုံစံအပြည့် ၊
သွက်သွက်လက်လက် စကားပြောဟန်လေး နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အသွင်အပြင်လေးနဲ့ ဝတ်တက်စားတက်ဆိုတော့ ကောင်လေးတွေကြားမှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေသူတစ်ယောက်ပေါ့ ။
နောက်တစ်ခု ကြယ်ဖြူရဲ့ ထူးခြားချက်က ရည်းစားတွေ ထည်လဲတွဲတက်တာပေါ့ ။ ကြယ်ဖြူက
ရည်းစားများသလောက် အပြောလဲကောင်းတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ရည်းစားတွေအများကြီးက သူမပွေရှုပ်တဲ့
အကြောင်းကို ဘယ်သူမှမသိကြဘူး ။ ဒီအထဲ့မှ ကြယ်ဖြူ သံယောဇဉ်အ၇ှိဆုံးတစ်ယောက်က လင်းနေ ။
ဒီကောင်လေးကလဲ ခေသူတော့ မဟုတ်ဘူး ကောင်မလေးတွေ ကြွေလောက်တဲ့ ရုပ်ရည်အပြောအဆိုနဲ့ ငွေကြေးကလည်း ပြည့်စုံဆိုတော့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်သူ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပေါ့ ။
ကြယ်ဖြူက သူမရဲ့ရည်းစားတွေ အများကြီးထဲကမှ လင်းနေကို ဘာကြောင့်သံယောဇဉ်ရှိရသလဲဆိုတော့
လင်းနေက ကြယ်ဖြူအပေါ်အနစ်နာခံတယ် ကြယ်ဖြူ ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး သည်းခံတယ် ကြယ်ဖြူလိုအပ်သမျှကိုလည်း လိုက်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးတယ် နောက်ဘာပြောပြော ကြယ်ဖြူ စကားပဲ အဓိကအကျဆုံးတစ်ချက်ကတော့
ကြယ်ဖြူကို တကယ်ချစ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုတာပေါ့ ။
တစ်နေ့မှာ မမျှော်လင့်လဲ လင်းနေတစ်ယောက် ကြယ်ဖြူမှာ ရည်းစားတွေအများကြီး ရှိတယ်ဆိုတာကို သိသွားတယ် ။
လင်းနေအတွက် ကြယ်ဖြူက တကယ်ချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေး ဆိုတော့ အခုလို ကြယ်ဖြူမှာ ရည်းစားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သိသွားခဲ့တော့ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ် နောက်ပြီး ကြယ်ဖြူကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမှာ ကြယ်ဖြူက
သူ့ကိုထားသွားမှာကို စိုးရိမ်လာတယ် ။ ဒါကြောင့် ကြယ်ဖြူကို တွေ့ဖို့ချိန်းလိုက်ပြီး ကြယ်ဖြူကို လက်ထပ်ချင်ပါပြီဆိုပြီး
အတင်းပူဆာတော့တယ် ။ ကြယ်ဖြူကတော့ လင်းနေ အပေါ် သံယောဇဉ်ရှိတယ်ဆိုပင်မဲ့ အခုချက်ခြင်းလက်ထပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ထင်တယ် ။ နောက်သူမရဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အပျိုစင်ဘဝလေးကိုလဲ လက်မလွှတ်ချင်သေးဘူး ။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ လင်းနေကို သူမအခုချိန်ထိ ချစ်လားမချစ်လားဆိုတာ သေချာမသိသေးဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်နေတယ် ။
ဒါပေမယ့် လင်းနေက သူမအပေါ် အနစ်နာခံတယ် အရာရာလဲ ပြည်စုံနေတယ် နောက်သူမကလဲ ရည်းစားတွေအများကြီးထဲမှာ
လင်းနေကိုပဲ သယောဇဉ်ရှိတဲ့အတွက် တစ်နေ့ သူမလက်ထပ်မယ့် သူဟာ လင်းနေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကလဲ၇ှိတယ် ။
ကြယ်ဖြူက ဆင်းရဲမှာနဲ့ သူမကို တကယ်မချစ်တဲ့သူကို လက်ထပ်ရမှာ အကြောက်ဆုံးပဲ ။ အခုလို လင်းနေက လက်ထပ်ဖို့ ပြောလာတော့ သူမအနေနဲ့ လင်းနေလို လူတစ်ယောက်ကို လက်လွှတ်လိုက်ရမှာ ငြင်းလိုက်ရမှာကိုလဲ မလိုလားဘူးဖြစ်နေတယ် ။ ဒါကြောင့် ကြယ်ဖြူကတွေးလိုက်တယ် လင်းနေနဲ့ သူမဘယ်သူမှမသိအောင် တိတ်တိတ်လေး လက်ထပ်ထားကြမယ် အခုချိန်ကတော့
လက်ထပ်ဖို့ဆိုတာ ငယ်သေးတဲ့အပြင် သူမအတွက် ကဲလို့တောင်မဝသေးဘူးလို့ တွေးမိတယ် ။ ဒါနဲ့ သူမစဉ်းစားထားတာလေးကို လင်းနေကိုပြောပြလိုက်တယ် အစပိုင်းကတော့ လင်းနေက ဘယ်သူမှမသိအောင်ဆိုတဲ့ စကားကို သိပ်သဘောမကျပင်မယ့်
အချိန်တန်ရင်တော့ သူက ကြယ်ဖြူ့ကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာကိုတော့ သဘောကျမိတယ် ။ အဲတာနဲ့ လင်းနေလည်း ကြယ်ဖြူရဲ့ စကားကို သဘောတူနေကျအတိုင်း ခေါင်းညိတ်လိုက်မိတယ် ။နောက် ကြယ်ဖြူက လင်းနေဆီက ကတိတွေအထပ်ထပ်ကိုတောင်းနေတယ်
အဲဒါက သူမတို့ လက်ထပ်တာကို ဘယ်သူ့ကိုမှပြောဖို့နဲ့ သူတို့ အခုလိုရည်းစားအဆင့်ကနေ ဘယ်လိုမှ အဆင့်ထပ်မတပ်ကြဖို့ကိုပေါ့ ။
ကြယ်ဖြူဆီက လက်ထပ်ခွင့်ဆိုတာကို ရသွားပြီ ဖြစ်တဲ့လင်းနေကတော့ ကြယ်ဖြူ ဘာပြောပြော ခေါင်းတညီတ်ညိတ်နဲ့ သဘောတူပြီးရင်းတူလို့
ပျော်ရွှင်မူတွေက အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်နေရှာတယ် ။ ဆက်ရန် …………
PS ….. နွယ်ပင် မရေးတက်ရေးတက်နဲ့ ရေးထားတဲ့ ဝတ္တူမကျ ဘာမကျလေးပါ ရွာသူ / ရွာသားတွေဖတ်ပြီး ဝေဖန်ပေးကြပါဦးနော် ……….
ရန်သူမျိုး ငါးပါးလက်က လွတ်အောင် … တိတ်တိတ်လေး ခိုးပြီး လက်ထပ်ထားဖို့ … စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ … လက်တွေ့ဘ၀မှာ တုံ့ဆိုင်းနေမိတယ် …. ။ ကံကြမ္မာကို ကြိုမမြင်နိုင်တော့ ….လက်ထပ်ရမယ့်အတူတူ အချိန်နည်းနည်း ပိုစောင့်ရလည်း … လူသိရှင်ကြားလက်ထပ်တာပဲ ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ … တကယ်သာ သံယောဇဉ်နဲ့ ရေစက်ရှိမယ်ဆိုလျှင် သိကြားမင်း ဆင်းပြီးပွဲဖျက်တာတောင် မပျက်နိုင်ပါဘူးလို့ပဲ နှလုံးသွင်းထားလိုက်တော့တယ် …
ဟုတ်တယ် etone ရေ နွယ်ပင်လည်း အရင်က အဲလို စဉ်းစားခဲ့ဖူးပင်မယ့် ကိုယ့်ရှေ့မှ သူငယ်ချင်းအတွဲက (3) နှစ်လောက်တွဲလာပြီး အဲလိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြတယ် နောက်တော့
လက်မှတ်ထိုးပြီး ဘာမှမကြာဘူး သဘောထာချင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ ပြန်ကွာ၇ှင်းလိုက်ပြန်ရော ။
သူတို့နှစ်ယောက် လူမသိသူမသိလက်ထပ် လူမသိသူမသိ တစ်ခုလပ်ဖြစ် ။
အဲတာကို မြင်တော့ နွယ်ပင်လည်း စိတ်ကူးကို ဖြတ်လိုက်တယ် ဖူးစာပါရင်တော့ ဆိုပြီးပေါ့…
အခုတော့ ဖူးစာပါလို့လား မသိဘူး အဟဲ
အဟီး .. အားကျတယ် … :D
နွယ်ပင်တို့များ ဖူးစာပါလာတော့ နှဖူးကိုပေါက်တော့တာပဲ ဟိဟိ
တိတ်တိတ်လေး လက်ထပ်တာလဲ သက်သေရှိရင် တရားဝင်အကြင်လင်မယားဖြစ်တာဘဲ မို့လား။ နောက်တခု ဆက်ဖတ်ပီး ဆက်ဝေဖန်အုံးမယ်။
ဟုတ်ပါတယ် Shwe Ei ရေ တိတ်တိတ်လေး လက်ထပ်တာလဲ သက်သေရှိရင် တရားဝင်အကြင်လင်မယားဖြစ်တာပါဘဲ ဒါပေမယ့် လူမသိသူမသိ အဲလိုလက်ထက်ကြပြီး
လူမသိသူမသိ ကွဲသွားတဲ့ အတွဲလေးတွေလည်း အများကြီးပါ …
အပြင်မှာ လည်း တ ကယ် ရှိ တယ် ၊ မန်း လေး မှာ ထိုး မုန့်ဝယ် သ လို အစုံ မြည်း ကြည့်ပြီး မှ
ကြိုက် ရင် ၀ယ် တယ် ၊ မကြိုက် ရင် မ ဝယ် ဘူး ။ ဟို အ ကောင် တော့သေ မှာ ပဲ ။။။။။။
များသောအားဖြင့်ကတော့ အတူနေပြီးမှ နှစ်ဦးသဘောတူ စာချုပ်ဖွင့် လက်ထပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မိန်းခလေးဖက်က နာတယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုကတဲက အတည်အတံ့ဖြစ်ချင်တဲ့သဘော၊ ဘာသာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်လည်း အပြစ်မဖြစ်အောင်ဆိုပြီး မိန်းခလေးတွေ လုပ်တာများပါတယ်။ ကံအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ ကွဲတဲ့အခါ၊ သစ္စာပျက်ကြတဲ့အခါ ဖုံးဖိမရ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လူပြောမခံချင်လို့ စာချုပ်ထားခဲ့တာလေ။ တွေ့ဖူးပါတယ်၊ အရင်တယောက်နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထား၊ အခါအားလျော်စွာ စုံတွေ့ကြ၊ နောက်တော့ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး အသစ်တွေ့၊ လက်ထပ်ခါနီး ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ လက်ထပ်ခါနီးမှ ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲရောက်တာ။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပါပဲ။ ကျုပ်ကတော့ အသက်ကြီးလာလေ အကျင့်စရိုက်ပေါင်းစုံကို တွေ့နေရလေမို့ ပျိုပျို အိုအို ကိုကို မမ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထူးထွေမသနားတော့ဘဲ ကျားသဘာဝကျား မသဘာဝမ ကိလေသာ ထကြတယ်လို့သာ လက်ခံထားလိုက်ပါတော့တယ်။ အသူခံ အံသူခ ညဏ်ကူမှ ရမယ်ဗျို့..။